एसिया कप छनोटको तेस्रो चरण पुग्ला नेपाल ? | सबै खेल
एसिया कप छनोटको तेस्रो चरण पुग्ला नेपाल ?
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०१:०४
यतिखेर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिममले सन् २०२२ को विश्वकप र सन् २०२३ को एसिया कपको दोस्रो चरणको छनोट खेलिरहेको छ।
कुवेतमा भइरहेको छनोटमा एक खेल मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा नेपालको विश्वकप छनोटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना सकिइसकेको छ । तर, एसिया कप छनोटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना भने बाँकी छ ।
एसिया कप छनोटको अघिल्लो चरण पुग्ने सम्भावना बाँकी रहेपनि त्यो नेपालका लागि त्यति सहज भने हुने छैन। किनभने तेस्रो चरणको छनोट खेल्न नेपालले प्ले अफको साहरा लिनु पर्ने पक्का जस्तै छ ।
त्यो किनभने दोस्रो चरणको छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालले एसियन पावर हाउस अस्ट्रेलियाको सामना गर्दै छ। अस्ट्रेलियालाई हराउन सकेमात्र सिधै तस्रो चरणको छनोटमा पुग्ने नेपालको सम्भावना रहन्छ । अस्ट्रेलियालाई हराउनु नेपालका लागि असम्भव जस्तै रहेकाले प्लेअफ खेल्ने पक्का जस्तै भएको हो।
दोस्रो चरणका छनोटका ८ समूहका चौथो स्थानमा रहने शीर्ष ४ टिमले सिधै तेस्रो चरणको छनोटमा स्थान बनाउने छन्। समूह बीमा २ जितसहित ६ अंक जोडेर नेपाल चौथो स्थानमा छ, तर कोरोना महमारीका कारण उत्तर कोरियाले दोस्रो चरणको छनोटबाट नाम फिर्ता लिएपछि चौथो स्थानको शीर्ष ४ मा नेपालको सम्भावना कमजोर बनेको हो।
कोरियाले नाम फिर्ता लिएपछि प्रत्येक समूहका चौथो हुने टिमले पाँचौं स्थानमा रहने टिमसँग प्राप्त गरेको अंक नजोडिने भएपछि नेपाललाई घाटा भएको हो। नेपालले ६ अंक नै पाँचौं स्थानको चाइनिज ताइपेइविरुद्ध प्राप्त गरेको हो। त्यसैले चौथो स्थानको तालिकामा शुन्य अंकसहित नेपाल पुछारमा छ।
यस्तो छ छनोटको बाटो
यो विश्वकप-एसियन कपको छनोटमा आठ समूहमा ३९ टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
प्रत्येक समूहका शीर्ष ८ आठ टिम र दोस्रो हुनेमध्ये उत्कृष्ट चार गरी १२ टिमले सिधै एसियाक कपमा स्थान बनाउने छन् । यस्तै, यी १२ टिम विश्वकप छनोटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन् ।
प्रत्येक समूहका दोस्रो (दोस्रो स्थानका पुछारका ४) र तेस्रो हुने ८ तथा चौथो स्थानका उत्कृष्ट ४ टिमगरी १६ टिमले एसिया कपको तेस्रो चरणका छनोटमा खेल्ने छन्।
त्यसपछि चौथो स्थानका पुछारका ४ टिम र पाँचौं हुने ७ गरी ११ टिमले एसिया कपको तेस्रो चरणको छनोटमा स्थान बनाउन प्लेफ खेल्ने छन्। प्लेअफबाट ८ टिमले तेस्रो चरणको छनोटमा स्थान बनाउने छन्।
तेस्रो चरणमा सिधै छनोट भएका १६ र प्लेअफबाट आएका ८ गरी कुल २४ टिम सहभागी हुने छन्। यी २४ टिमलाई ६ समूहका विभाजन गरिने छ । यी ६ समूहका शीर्ष दुई टिमले एसिया कपमा स्थान बनाउने छन्।
यदि चीनले एसिया कप छनोट चरण पार गर्न नसकेमा तेस्रो चरणको छनोटबाट ११ टिमले मात्र एसिया कप खेल्न पाउने छन् । चीनले आयोजकका रुपमा छनोटमा असफल भएपनि एसिया कप खेल्ने छ। एसिया कप २४ टिम सहभागी हुने छन्।
Tags: Nepali Football Team, world cup 2022 asia qualifer
अस्ट्रेलियाविरुद्ध नयाँ खेलाडीले मौका पाउने सम्भावना छः प्रशिक्षक अलमुताइरी
श्रीलंका भ्रमणमा भारतको कप्तानी धवनले गर्ने
डेढ दशकपछि रामोसले छाडे रियल
३ असार २०७८, बिहीबार ०९:५२
लोकाटेली चम्किँदा इटालीको सहज जित, बन्यो नकआउट चरण पुग्ने पहिलो टिम
३ असार २०७८, बिहीबार ०९:२२
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल फुटबल फुटबल लिग/कप युरोकप २०२० समाचार
टर्कीविरुद्ध वेल्स विजयी, नकआउट पुग्ने सम्भावना बलियो
३ असार २०७८, बिहीबार ०१:०३
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल फुटबल फुटबल लिग/कप समाचार
कोपा अमेरिकामा ब्राजिल पेरुसँग भिँड्दै
२ असार २०७८, बुधबार २२:२७
युरोकपमा ९ वर्षपछि रुस विजयी
२ असार २०७८, बुधबार २१:३४
युरोकप २०२० समाचार
म्याच प्रिभ्यू : जितको खोजीमा वेल्स, टर्की र स्वीट्जरल्यान्ड, इटाली र फिनल्यान्डको लय कायम राख्ने चाहना
२ असार २०७८, बुधबार १५:२०